Usathwele kanzima owagwetshelwa ukudlwengula emsulwa | Isolezwe
Usathwele kanzima owagwetshelwa ukudlwengula emsulwa
Izindaba / 15 April 2019, 1:53pm / SIPHELELE BUTHELEZI
UMnuz Njabulo Ndlovu ukhululwe ejele laseWestville nyakenye kulandela isikhathi egqigqa izinkantolo ezama ukugeza igama lakhe kulandelwa ukugwetshwa ngecala lokudlwengula owesifazane owayekhulelwe ngo-2005. Isithombe: Bongani Mbatha/ANA
USATHUNGATHA umsebenzi owesilisa oboshwe iminyaka engu-13 ngecala lokudlwengula angalenzanga.
UMnuz Njabulo Ndlovu ukhululwe ejele laseWestville nyakenye kulandela isikhathi egqigqa izinkantolo ezama ukugeza igama lakhe kulandela ukugwetshwa ngecala lokudlwengula owesifazane owayekhulelwe ngo-2005. Nyakenye iNkantolo eNkulu eMgungundlvu yamthola emsulwa kuleli cala, yaveza ukuthi iMantshi eyayiliphethe yenza ubuhlathi ingabunaki obunye ubufakazi okubalwa kubo obe-DNA obabuzokhipha phambili uNdlovu.
Ngesikhathi eboshiwe uNdlovu, akazithelanga ngabandayo njengoba aphothula izifundo zakhe zezomthetho waphuma eneziqu. Sekuphele izinyanga eziyisikhombisa uNdlovu ehlezi ekhaya neziqu zakhe ngenxa yokungacishwa kwegama lakhe kubantu asebeke baboshwa phambilini.
“Ngisanda kuvivinywa komunye umsebenzi engiwubhaliselile ngaphasa, kodwa le nkampani yabameli igcine ingazisa ukuthi icriminal record yami ayikacishwa ngakho ngeke bakwazi ukuqhubeka nesicelo sami,” usho kanje.
UNdlovu uthe wadukiswa enkantolo ngokuthi izosuswa icriminal record yakhe ngoba watholwa emsulwa.
“Ngicabanga ukuthi nezinye izinkampani engabhalisela umsebenzi kuzo zangiziba ngenxa yakho ukungalungiswa kwe-criminal record.”
Uthe ngesonto eledllule uye esiteshini samaphoyisa iBhekithemba, eMlaza, lapho aboshelwa khona wafaka isicelo sokuthi kulungiswe lolu daba.
“Kuzongithatha isikhathi ukuthola umsebenzi kodwa ijele lingifundise ukubekezela,” kusho uNdlovu.
Ethintwa yiphephandaba elinguzakwabo weSolezwe, iSunday Tribune okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLieutenant Colonel Thulani Zwane, ucele icase number kaNdlovu ukuze alandelele.
UNdlovu uthe umangalela umbuso futhi ufuna uhlawule ngezigidi zamarandi ngokuboshwa nokugwetshwa kwakhe ecaleni angalenzanga.
Uthumele umbuso amasamanisi. Umnyango wezoBulungiswa ukuqinisekisile ukuthi uyamangalelwa kodwa ngeke ukwazi ukuphawula ngoba udaba selusenkantolo.
Isazi sezomthetho uMnuz Anand Nepaul uthe uma obeboshiwe etholwa emsulwa, umshushisi kumele axhumane nomphenyi wecala bese kuba nguye obika ngalokhu kwiCriminal Record Centre engaphansi kwe-SAPS.